Mayelana nathi - Handan Zhanyu Fastener Co., Ltd.
I-Handan Zhanyu Fastener Co., Ltd.isendaweni yezimboni yedolobhana lase-dongmingyang, isifunda sase-Yongnian, idolobha lase-Handan, esifundazweni sase-Hebei. Le nkampani ihlanganisa indawo engaphezu kuka-20000 square metres, enenhlokodolobha ebhalisiwe yama-yuan ayizigidi ezi-5 kanye nabasebenzi abangaphezu kuka-220. Imikhiqizo eyinhloko yenkampani: umshudo, umuthi, ihange, Isikulufu sokuzivivinya, isikulufu se-drywall, ukulahla ihange, iphiko lepulasitiki, insimbi emise u-C, induku yentambo, ihange lesigaxa nezinye izinhlobo zemikhiqizo yokuqinisa.
Le nkampani ineminyaka eminingi yokuqina kokukhiqiza kanye nokuthengisa okuhlangenwe nakho, ngomugqa ophelele womkhiqizo, ubuchwepheshe bokuhlola ikhwalithi esezingeni eliphakeme, uhlelo oluqinile lokulawula ikhwalithi, iqembu lobuchwepheshe lonjiniyela bezobuchwepheshe, ukuhlola ikhwalithi yemikhiqizo kuwo wonke amazinga, seludlulile uhlelo lwekhwalithi le-ISO isitifiketi. Ubuchwepheshe nemishini yenkampani ivuselelwa usuku nosuku, futhi isikali sayo sokukhiqiza sikhula kancane kancane. Sekwakhiwe kwaba ibhizinisi elinemisebenzi eminingi ebanzi elihlanganisa ukucubungula okwenziwa ngemishini, izesekeli zokwakha, izingxenye zezimoto, izesekeli zamandla, kanye nokuthuthukiswa kwezingxenye ezijwayelekile zomhlaba jikelele nokukhiqiza. Imikhiqizo eminingi ithunyelwa ezimakethe ezahlukahlukene ekhaya nakwamanye amazwe.
Inkampani yethu ikholelwa kwisisekelo "sokusinda ngekhwalithi, ukuthuthukiswa ngenkonzo". Impumelelo yethu enkulu ukuzuza ukwethenjwa kwakho, ukuze ube ngumlingani wakho onokwethenjelwa, ukunqoba ukwethenjwa kwamakhasimende amasha namadala ngenxa yolwazi lomsebenzi nobuchwepheshe nomoya wokuqamba okuqhubekayo.
Inkampani yeZhanyu izojoyina izandla nazo zonke izisebenzi ngokuzayo ukukusebenzela ngenhliziyo yonke futhi zenze ubuhlakani ndawonye !!!
IHandan City Yongnian District Zhanyu Fastener Manufacturing Co., Ltd., ngemishini esezingeni eliphezulu, brand xinzhanyu.
Isungulwe ngoDisemba 15, 2013, etholakala eMingyang Village Industrial Zone, eTiexi, esifundeni saseYongnian, eHandan, esifundazweni saseHebei, inkampani ihlanganisa indawo engaphezu kwamamitha skwele ayi-17000, enenhlokodolobha ebhalisiwe yama-yuan ayizigidi ezingama-35 nabasebenzi abangaphezu kuka-120. Le nkampani ineminyaka engaphezu kwengu-10 yesipiliyoni sokukhiqiza nokuthengisa, imishini esezingeni eliphakeme, inani elikhona lamarobhothi wokushisela othomathikhi, umshini wokugoba amakhaza othomathikhi, umshini ohamba phambili obandayo obandayo, umshini wokushaya isitampu somoya onemba kakhulu.
Ukusekelwa okuhle kokuzamazama komhlaba. Kukhethwe uZhanyu
Handan Yongnian Zhanyu Fastener Ukukhiqiza Co., Ltd.